यसरी छान्नुहोस् राम्रो स्मार्टफोन, पछुताउनु पर्ला नी – Nirantarkhabar
बेलबारी नगरपालिकाले घोषणा गरेको विदा सरकारी कार्यालयहरुले नै मानेनन्
असार २ गते बेलबारी नगरपालिकामा सार्वजनिक विदा
बेलबारी ७ मा प्रधानमन्त्री स्वरोजगारका लागि छानिएकाहरु काममा खटिए
प्रदेश १ कै नमुना नर्सरीको उद्घाटन
कांग्रेस मोरङ क्षेत्र ३ मा जागरण अभियानको समापन
बेलबारी अब प्लाष्टिक मुक्त
बेलबारीमा अब जताततै बेलका रुख
एक घण्टा लगाएर जवाफ दिए प्रमुख फागोले
भ्रष्टाचार बिरुद्ध राष्ट्रिय अभियान थालेको जनमुक्ति पार्टीले बेलबारीमा गर्याे हस्ताक्षर संकलन
सुन्दरहरैँचाका जनप्रतिनीधी र कर्मचारीका लागि बजेटबारे प्रशिक्षण
यसरी छान्नुहोस् राम्रो स्मार्टफोन, पछुताउनु पर्ला नी
विविध कारणले तपाईलाई नयाँ फोनको आवश्यक परी रहेको छ ? के ? कस्तो ? कुन ब्राण्डको ? एन्ड्रोइड वा आइओएस कुनको अपरेटिङ सिस्टम राम्रो छ ? धेरै वैकल्पिक छनौट बजारमा भएको बेला यस्ता प्रश्न आउनु स्वभाविक हो ।
अाफूलार्इ आवश्यक परेको डिजाईन, अपरेटिङ सिस्टम, स्टोरेज र राम्रो क्यामेरा जस्ता कुराको सूचि तयार गरेर बजारमा किन्न जान सकिन्छ । प्रविधिले अझ सहज बनाई रहेको बेलामा तपाईले स्मार्टफोनको सम्पूर्ण मूल्य देखि बिशेषता घरमै बसेर प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ ।
पसलमा गएपछि हामी सर्वप्रथम आँखाले राम्रो देख्ने कुराहरु रोज्छौँ तर त्यस्तो स्मार्टफोनहरु राम्रो देखेर भएर मात्र हुदैँन । फोनहरु खरीद गर्ने बेला विविध कुराहरु हेर्नु पर्छ । जस्तै : अपरेटिङ सिस्टम, स्टोरेज, क्यामेरा, ब्याट्री लाईफ, मूल्य, डुअल सिम र नेटवर्क ईत्यादी कुराहरु ख्याल गर्नुपर्छ ।
मूल्य निर्धारण गर्नुहोस्:
सर्वप्रथम अाफूले स्मार्टफोनमा कति खर्च गर्ने मूल्य निर्धारण गरौँ र त्यही अनुसार फोनको छनोट गरौँ । महँगो छान्ने हो भने तपाईले आइफोन र सामसुङ लिन सक्नु हुन्छ र मध्यम मूल्यको चाहानु हुन्छ भने एन्ड्रोइड भर्जनका अन्य स्मार्टफोन खरिद गर्न सक्नु हुन्छ । तर केही एन्ड्रोइड भर्जनका फोनहरु पनि महँगो रहेका छन् । जस्तैः ग्यालेक्सी नोट ९ । मध्यम मूल्यमा जानुहुन्छ भने सामसुङकै अन्य रेन्जका माेडल, हुवावे, ओप्पो, शाओमी लगायतका प्रडक्टहरु बजारमा छन ।
नेपालमा ३० हजार मूल्यसम्मका स्मार्टफोनहरु बढि बिक्री हुने देखिएको छ । यो रेन्जमा हुवावे, सामसुङ र ओप्पो र शाओमीका सेटहरु नै धेरैको रोजाइमा परेको पाइन्छ । अहिले ३० देखि ४० हजारको रेन्जमा केहि राम्रा स्मार्टफोनहरु बजारमा उपलब्ध छन । ५० हजार बढिको बजेट छ भने तपाइले सामसुङ, आइफोन, हुवावे र वान प्लसका फोनहरु नै हेर्दा राम्रो हुन्छ ।
अपरेटिङ सिस्टमको छनोट:
तपाईले अहिले चलेका आइओएस र एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममध्येकै एक अपरेटिङ सिस्टम भएकाे स्मार्टफाेन छनोट गर्न सक्नुहुन्छ ।
दुबै प्रयोग गर्न सजिलो र विविध एप तथा गेमहरु सपोर्ट गर्दछ ।
एन्ड्रोइडले तपाइलाई विभिन्न मूल्यमा विविध फोनहरु छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ ।
तपाई गुगल म्याप, जीमेल, गुगल डक्सहरु प्रयोग गर्नु हन्छ भने एन्ड्रोइड तपाइको लागी सुहाउने छ । यसमा भएको गुगल असिस्टेन दिन प्रति दिन जुनसुकै समयमा पनि यसको प्रयोग वृद्धि भएको छ । यसैगरी स्थानिय एप्लिकेशन र सर्भिसेसहरु धेरै एन्ड्रोइडमा अपडेट छन । धेरैलाई एन्ड्रोइड युजर फ्रेन्ड्ली पनि लाग्छ । यसर्थ एन्ड्रोइडमा विभिन्न रेन्ज र ब्राण्डहरु उपलब्ध छन ।
यदि तपाई नयाँ सुविधाहरु, बग फिक्स र सेक्यूरिटी अपडेटहरु चाहनुहुन्छ भने तपाईले आइओएस रोज्नु आवश्यक हुन्छ ।
तपाईले आइफोन खरीद गर्नु भएमा तपाईले यसको लेटेस्ट भर्जन प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ तर, कुनै एन्ड्रोइड फोनमा यस्तो विशेषता हुदैँन, भए पनि अप–टु–डेट भई रहदैँन । गुगल स्टक एन्ड्रोइड फोनहरु र अलि हाइरेन्जका एन्ड्रोइडमा तत्काल र लगातार एन्ड्रोइड अपडेट प्राप्त गर्न सकिन्छ । जस्तै पिक्सल २
स्टोरेज र र्याम
हालको स्मार्टफोनहरु धेरै स्टोरेजमा आएका छन् । २ जिबी र्याम र १६ जीबीको स्टोरेज सामान्य भइसकेका छन् ।
३२ जीबीको भन्दा ६४ जीबी स्टोरेज भएको स्मार्टफोन राम्रो हुन्छ । स्टोरेज र र्याम अनुसार स्मार्टफोनको मूल्य निर्धारण हुने हुँदा बजेटसँग तुलना गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
तर ४ जिबी र्याम र ६४ जिबी स्टोरेज भएका फोनहरु लिएमा केहि वर्ष ढुक्क हुनसक्नुहुन्छ । तपाई गीतहरु राख्न मिल्ने तथा माईक्रो एसडी कार्ड हाल्न मिल्ने फोन खाज्दै हुनुहुन्छ भने एन्ड्रोइड फोनहरुमा मात्र रहेको छ । एपल आइफोनमा माईक्रो एसडी कार्ड हाल्न मिल्दैन ।
अाफूलाई अनूकुल हुने ब्याट्री लाईफ भएको फोन रोज्नुपर्छ । ब्याट्री क्षमतामा त्यसको एमएएच मात्र हेरेर हुँदैन । स्मार्टफोनहरुको स्क्रिन साइज, रेजोल्युशन र सफ्टवेर क्षमताले पनि असर पार्दछ । तर कम्तिमा ३ हजार एमएएच व्याट्री भएका फोन लिनु उपयुक्त हुन्छ । छिटो चार्जिङ हुने नयाँ प्रविधिका फोनहरु पनि बजारमा उपलब्ध छन् । चार्जिङ र व्याकअप दुबै हेर्नुपदर्छ ।
छिटो चार्जिङ हुने फोनमा ओप्पो एफ नाइन पनि बजारमा उपलब्ध छ । वायरलेस चार्जिङ लगायतका विशेषता भएका हाइरेन्जका फोनहरु पनि बजारमा छन् । यसैगरी ठूलो ब्याट्री भनेर जुनसुकै फोन लिँदा ब्याट्रीको समस्याले पड्केका वा नोक्सान भएका उदाहरण पनि छन् । यसकारण यस्तोमा पत्रपत्रिकाक रिभ्यु, साथीभाई फिडब्याक पनि उपयुक्त हुनसक्छ ।
तपाई सेल्फीहरु खिच्न रुचाउनु हुन्छ भने तपाईले राम्रो सेल्फी लिन मिल्ने स्मार्टफोनहरु छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । फोन खरीद गर्न जाँदा क्यामेरा टेस्ट गर्न पाउनु भएमा त्यसको क्यामेरा कतिको राम्रो छ तपाईलाई थाहा हुन्छ । त्यसैगरी तपाईले फोनको रिभिऊबाट पनि थाहा पाउन सक्नु हुन्छ ।
अहिले बजारमा क्यामेरालाई फोकस गरेर स्मार्टफोनहरु आइरहेका छन । धेरैले डिएसएलआर फिचर दिने गरि एक साइडमा ड्युल क्यामेरा फोनहरु उपलब्ध छन । हुवावे, सामसुङ, ओप्पो लगायतले क्यामेरामा नयाँ विशेषताहरु थप्दै बजारमा ल्याइरहेका छन । हुवावे पि २०, नोट ९, आइफोन एक्समा राम्रो क्वालिटीको क्यामेरा छ ।
अलि कम रेन्जमा खोज्नुहुन्छ भने सामसुङ ए ७ को नँया भर्सनमा पछाडी ३ वटा क्यामेरा छ । हुवावे नोभा ३, ओप्पो एफ ९ मा नि राम्रै क्यामेरा प्रयोग भएको छ । तर क्यामेरा सुरुमा राम्रो भएपनि ड्युरेवल नहुनसक्छ यसर्थ क्यामेरा कम्तो छ, कुन कम्पनीले बनाएको हो भन्ने कुराहरु पनि अपडेट हुनुपर्दछ ।
अाफूलार्इ अनुकुल हुने स्क्रिन भएको फोन छनोट गर्नु आवश्यक रहेको छ । आज भोलीका फोनहरु अगाडि स्क्रिन सिसाको र पछाडी पनि सिसा रहेको हुन्छ त्यसले सजिलैसँग फुट्न सक्छ । त्यसैले आफूललाई अनुकुल स्मार्टफोनहरु छनोट गर्नु आवश्यक छ । स्क्रिन तथा डिस्प्लेका नयाँ प्रविधिहरु जान्नु आवश्यक छ । आइपिएस एलसिटी डिस्प्ले आजभोली सामान्य हो । झर्दा नफुट्ने तथा वाटरप्रुफ डिस्प्लेहरु भएका फोनहरु पनि रोज्न सकिन्छ ।
तपाई धेरै भिडियो हेर्नु हन्छ भने तपाई ठूलो स्क्रिन भएको फोन हेर्नु हुन्छ । आइओएस रोज्नु हुन्छ भने आइफोन “एसइ” सिरिज र आइफोन प्लस सिरिजले तपाईलाई ठूलो स्क्रिन प्रदान गर्दछ । सामसुङ नोट सेरिजका फोनहरु पनि ठुलो डिस्प्लेमा रहेका छन । थोरै बजेटमा हुवावे, सामसुङ, ओप्पो, शाओमी लगायतका बजेट फोनहरु पनि उपलब्ध छन् ।
तपाईहरु मध्ये जो एउटा सिम बिजनेशको लागी र अर्को सिम अन्यको लागी प्रयोग गर्नु हुन्छ भने दुई वटा सिम प्रयोग हुने फोन रोज्नु उपयोगी हुन्छ ।
स्मार्टफोनहरु खरीद गर्दा कतिको टिकाउ छ, धुलो र पानी प्रतिरोध सिसा प्रयोग भएको छ वा छैन आफ्नो आवश्यकता अनुसार हेर्नु पर्छ । अहिले बजारमा नयाँ नयाँ प्रविधि तथा विशेषताहरु थप्दै स्मार्टफोनहरु अब्बल देखाउने प्रयासरत छन । कतिपय चर्चा बढि भएका फोनहरु राम्रो नै हुन्छ भन्ने छैनन । यसर्थ आफ्नो आवश्यक्ता र बजेट हेरि राम्रा फिचर भएका टिकाउ स्मार्टफोनहरु रोज्नुहोस । जसले तपाईलाई पछुतो हुने छैन ।
अाफैँले सिर्जेका ढकमक्क फुलहरुको संसारमा रमाउँदै दिपेश............
हरेक सरकारी कर्मचारीलाई अब सरकारी इमेल अनिवार्य
कर्माचार्यले गरे १५५ पटक रक्तदान
बेलबारीमा असार ७ गते गजल महफिल आयोजना हुने
बेलबारीमा पिछडा समुदायका व्यवसायीलाई विधुतीय तराजु वितरण